ENMG : Nofoanana ny fifaninanana? - Triatra 22 aout 2018 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil ENMG ENMG : Nofoanana ny fifaninanana? – Triatra 22 aout 2018
Niteraka resa-be teo amin’ny tontolon’ny Fitsarana sy ny manodidina azy ny filazana ny mety ho fisian’ny kolikoly teo amin’ny sekolim-pirenena manofana ho Mpitsara sy ho Mpiraki-draharaha nandritra ny fifaninanana hidirana ho Mpitsara notontosaina ny 6 febroary lasa iny. Savorovoro izay niteraka fandoroana ireo taratasim-panadinana tao an-toerana, ka nampiato ny fifaninanana ary ahemotra amin’ny fotoana manaraka. Raha ny tapaka ny tompon’andraikitra tamin’izany fotoana izany, ity volana aogositra ity no hanatanterahana ny fifaninanana nefa raha araka ny feo mandeha dia hofoanana tanteraka ny fifaninanana amin’ity taona ity. Manoloana izay dia manahy ireo mpianatra hiditra ho mpitsara, ary velon-taraina satria handoa vola vaovao indray amin’ny fifaninanana ho avy eo. “Manahy izahay mpianatra fa araka ny feo henonay dia hofoanana mihitsy ny fifaninanana hidirana ho Mpitsara amin’ity taona ity. Handoa vola foana izahay amin’ny fifaninanana vaovao ho avy eo”, hoy ny solontenan’ireo mpianatra mifaninana hiditra ho Mpitsara. Ireo olona mandinika aty ivelany kosa dia nanambara fa tsy laharam-pahamehana ny fanaovana io fifaninanana io amin’izao fotoana izao.
Tsy nanamarina ary tsy nanda ity raharaha ity kosa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana rehefa nanontaniana. “Ankoatra ny minisitra, dia ny sekretera jeneraly ary ny tale jeneraly no afaka manao fanambarana azy aty. Hisy fampitam-baovao ataon’ny minisitera raha hofoanana ilay fifaninanana fa hatreto ny baiko azo, tsy misy manao fanambarana mahakasika ny vaovao. Minisitra ihany no afaka miteny, ary aorian’izay vao afaka miteny izahay”, hoy ny talen’ny kabinetran’ ny minisiteran’ny Fitsarana, Rabarisoa Andry. Mahakasika ity raharaha ity ihany moa dia nanoratra taratasy tany amin’ny minisiteran’ny Fitsarana ny minisiteran’ny Asam-panjakana (FOP) ny 31 jolay lasa teo nanameloka ny fitsabatsabahana ataon’ny birao mpandrindra ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna ny fonja eo amin’ny dingana fanatanterahana ity fifaninanana ity.
Article précédentRenforcement de l’institution judiciaire considéré par la population malgache comme corrompue Pilier de la lutte contre la corruption – Lalignedemire.info du 21 août 2018
Article suivantLes tribunaux malgaches recourent aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas